Ama-Palletizer - I-Delta Engineering Belgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Ama-Palletizer"
Umshini wokugoqa kanye nokugcoba amakhadibhodi amakhadibhodi afinyelela ku-1200 x 1200 mm ngokuzenzakalelayo (ama-tray / ihora angama-30).
Ishicilelwe ku Ama-Palletizer
Faka i-palletizer ezenzakalelayo
I-palletizer ekhethekile, ezenzakalelayo ukupakisha imikhiqizo engenalutho emathokheni - itafula le-buffer 1200mm ububanzi / 1200mm ubude.
Iyunithi lenza amaphalishi aphakeme ukuphakama aze afike ku-1.6m ukuphakama.
I-palletizer ekhethekile, ezenzakalelayo ukupakisha imikhiqizo engenalutho emathiyizeni - ithebula le-buffer 1400 mm ububanzi / 1200 mm ubude.
Iyunithi ingenza amabanga okuphakama okufika ku-1.6 m ukuphakama.
I-palletizer egcwele ngokuzenzakalela ngesigcini setiyela esihlanganisiwe
I-palletizer egcwele ngokuzenzakalela ngesigcini setiyela esihlanganisiwe ukupakisha imikhiqizo engenalutho emathayeleni.
Iyunithi lenza amaphallet aphezulu okuphakama afike ku-3.1 m ukuphakama.
Amabhodlela we-palletizer azenzakalelayo namawaya wokugcina amathayi ahlanganisiwe ukupakisha imikhiqizo engenalutho emathiyini nasezinkalweni.
Amabhodlela we-palletizer azenzakalelayo anendawo yokugcina ehlanganisiwe yokupakisha ukupakisha imikhiqizo engenalutho emathiyizeni, kuma-hoods nakumashidi asicaba.
ULwesine, Julayi 14, 2016 by UCristina Maria Sunea
I-palletizer egcwele ngokuzenzakalela yeziqukathi ezingakwazi ukuqina
I-palletizer egcwele ngokuzenzakalela yeziqukathi ezingakwazi ukuqina yenzelwe ukuphatha iziqukathi ezingakwazi ukuqina ebangeni kusuka ku-5L.
Ngokuyisisekelo inguqulo ehlangene ye-DP300, ngaphandle kwe-roller conveyor goes Thru.
I-palletizer egcwele ngokuzenzakalela yeziqukathi ezingakwazi ukuqina. Ingenza ama-pallets aze afike ku-3.1 m.
I-palletizer egcwele ngokuzenzakalela yamashidi asicaba - eyodwa inwele
I-palletizer ezenzakalelayo ngokugcwele ukupakisha imikhiqizo engenalutho kumashidi amashidi okugcwala - one infeed.
Iyunithi lenza amaphallet aphezulu okuphakama afike ku-3.1 m.